Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika: Mihetsiketsika ny fikambanana maro samihafa
Politika: Mihetsiketsika ny fikambanana maro samihafa
Dia mbola izao ihany ve no hiainana eto Madagasikara hoy ny fanontaniana mipetraka amin’ny rehetra? Dia mbola hatao fitaovana politika indray ve ny fikambanam-pihaviana avy any amin’ny faritra? Tena izany no zava-misy amin’izao fotoana izao ary efa mihetsiketsika izay tsy izy ireny manao fivoriana sy fanovana birao izay hitantana azy.
Isan’ny nanaitra ny maro ny fahitana ny fivoriana nataon’ny olona avy any amin’ny faritanin’i Fianarantsoa iny tapa-bolana lasa izay. Sambany tao anatin’ny 5 taona no namory olona indray ny mpanao politika avy any amin’ity faritany ity. Maro ny resaka nandeha tamin’iny saingy dia noboriboriana tamin’ny fitenenana hoe fifankatiavana sy firaisankina hono, nefa dia mazava izao fa politika no ao ambadika azy iny. Fa angaha tsy azo atao izany raha tsy efa akaiky ny propangandy? Efa nahavita ny azy koa ny terak’i Bara, ny Fianta na ny fikambanan’ny Antemoro. Ny avy any faritanin’i Toliara dia niteraka resabe ihany koa ny taona lasa iny satria voalaza fa mifono politika be izany. Raha toa aza ka maty ilay mpifaninana ho filohan’ity fikambanana ity noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy dia maro ny resaka nandeha fa noho ny raharaha ny fikambanana hono no anton’izany, nefa dia iny niarahana nahita iny ny loza nitranga. Tsy tenenina intsony ny fihetsikin’ny “zanaka Avaratra” izay tarihin’ingahy Papa Soulé fa tena antoko politika mihitsy no fihetsik’ity fikambanana ity. Maro tsy tamby ho tanisaina eto avokoa izy rehetra ireo fa dia hajanon-tsika amin’ireo aloha.
Mihetsika avokoa ny fikambanana samy hafa amin’izao fotoana izao ary manao izay hisehoana amin’ny haino aman-jery isan-karazany avokoa ankehitriny. Hatramin’ny fikambanana aram-panatanjahantena aza dia idiran’ity politika ity avokoa. Izany no mitranga ao amin’ny taranja Rugby sy ny baolina kitra, ary ny ady totohondry sy ny “kick boxing”. Ny tena mahagaga dia ny fahitan’izy ireny vola izay hanaovana fisehoana tampotapoka teo.
Ny filohan’ireny fikambanana sy ny birao mitantanana azy dia mihevitra ny hanao fitaovana politika ny fikambanana ireny. Tsy mahagaga ankehitriny raha toa ka mivaona tanteraka ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ny tena mampalahelo aza dia ny fampiasana ireo ampanjaka sy tangalamena ho fitaovana politika koa ankehitriny. Fanimbana ny fomba sy ny kolotsaina ary ny fiarahamonina sy ny bako Malagasy tanteraka no misy noho izany.
Mbola olana koa ny mahakasika ny momba ny fidiran’ny fiangonana amin’ity politika ity. Hatramin’ny nidiran’ny FFKM (Fiombonan’ny fiangonana kristianina Malagasy) tamin’ny sehatra politika izay dia io iarahana mahita io ny zavatra misy eto. Ingahy Ravalomanana Marc dia miteny ho tompon’ny fiangonana FJKM, amin’izao fotoana izao indray dia milaza fo akaiky ny FLM ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ary ingahy Andry Nirina Rajoelina dia milaza fa akaiky ny Ekar na ny Katolika. Hatramin’ny fiangonana zandriny avy no manao politika ankehitriny ka io nidiran’i Pastora Mailhol sy ny maro hafa koa.
Fa mba aiza ny antoko politika ?
Tsy mahavita ny andraikiny intsony izy ireny ka izao zavatra mitranga ankehitriny eto Madagasikara izao no vokany. Matetika dia fatritran’olona koa no mitarika azy ireny ka nahaleo ny olona toa izao. Ohatra akaiky amin’izany ny antoko HVM (Hery Vaovao hoan’i Madagasikara) izay tsy ahitana olona tena tena tia tanindrazana na manaraka ny fenitra takiana mba hitondra sy hitantana ny firenena izany. Tsy mahagaga raha potika ny firenena ankehitriny